DHAGEYSO: M/weynaha Koonfur Galbeed oo aad u dhaliilay D. Faderaalka, dagaalna iclaamiyey – Puntlandtimes
DHAGEYSO: M/weynaha Koonfur Galbeed oo aad u dhaliilay D. Faderaalka, dagaalna iclaamiyey
September 9, 2018 W LAASCAANO
BAYDHABO(P-TIMES)- Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo, ka dib shan maalmood oo uu kusugnaa magaalada Kismaayo ayaa si adag uga hadlay arrimaha ku saabsan ismaandhaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Shariif Xasan oo ah nin aan looga baran ka hadlida arrimaha badan ee siyaasadda dalka, ayaa si adag u dhaliilay dawladda Faderaalka, wuxuuna ku eedeeyey in hab dhaqankeedu uu yahay mid liita oo hooseeya, isagoo kusifeeyey in ay isticmaalayso burburin siyaasadeed oo khatar galinaysa dalka.
Shariifku wuxuu ugu yeeray Shacabka Koonfur Galbeed in ay ilaashadaan dawladnimadooda, isagoo sheegay in Siyaasiinta iyo shacabka gobalada Baay, Bakool & Shabeelaha Hoose ay sannadkii 1950-kii Xornimadii Soomaaliya ka hor ay codsanayeen in la hirgaliyo Nidaamka Faderaalka oo la qaatay sannadkii 2004-tii.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in cid kasta oo nidaamkaas ka soo horjeeda ay duulaan ku tahay dawladnimada Soomaaliya oo ay waajib tahay in ay shacabku la dagaalamaan, taas oo uu taageero badan kaga helay shacabka, wuxuuna cadeeyey in uu dhabahaas ku taagan yahay.
Siyaasiinta ka aragtida duwan ayuu dhaliilay markii ugu horeysay, wuxuuna ku eedeeyey in ay ka shaqeynayaan in Koonfur Galbeed aysan dhibaatada ka bixin, taasi bedelkeedana wuxuu sheegay in uu wax badan qaban doono oo uu dalka nabad iyo wadooyinka isku furi doono.
La dagaalanka Al- Shabaab ayuu si ba’an ugu weeraray dawladda Faderaalka, wuxuuna ku tilmaamay n aysan dawladdu daacad ka aheyn dagaalka Shabaab, ee ay doonayso ujeedooyin siyaasadeed in ay u adeegsato ciidamada Qalabka, laakiib wuxuu sheegay in ay dhankooda isku tashanayaan oo ay cadowga Al- Shabaab ka saarayaan dalka.